VAKY BANTSILANA : Aza manao vava ren’Andriamanitra… | NewsMada
Miazakazaka fa miadam-pamindra ny fitondrana ankehitriny. Toy ireny maika ho aiza ireny, enjehina daholo izao rehetra izao nefa toa tsy mankaiza fa ny eto ihany no eto, miha-sahirana hatrany ny Malagasy. Voatety izao tontolo izao, tsy fantatra anefa izay vokatra. Toa efa lala-mahazatra ny mandeha mankany ivelany mamonjy izao karazam-pivoriana rehetra izao.
Ny vola lany andehanana amin’ireny fivoriana ireny ve tsy efa nahasokatra orinasam-panjakana entina hamelomana ny Malagasy sasantsasany e?, hoy ny eny ambany tànana mametra-panontaniana. Angamba, hoy ny valiteny sadasadan’ny mpanara-baovao. Raha tsiahivina, “euro” maromaro no lany mandritra ny fivahinianana indray mandeha any ivelany, nisy fotoana efa nitondra izany isika teto amin’ny gazety Free News.
Ny fisehosehoana no tena mahamaika antsika fa tsy ny asa. Raha jerena ifotony ny zava-misy, ny kabary no lasa aloha. “Aiza izao izay volabe azo noresahina nandritra ny fihaonan’ireo mpamatsy vola?” Raha hiverenana io tranga io dia efa nihirahira ny filoha fa efa azo ny vola fa ny ampiasana azy no mbola tsy fantatra. Ny mifamadika amin’izay anefa no tena andrasan’ny mpamatsy vola dia ny hoe “efa fantatra ny atao fa ny vola no mbola tsy eo ampelatanana”.
“Aza manao vava ren’Andriamanitra”, hoy ny Ntaolo izay. Mety henon’ireo mpamatsy vola ihany koa angamba ilay valin-teny niezinezina nataon’ny filoha tetsy Andohatapenaka tamin’ny fotoan’andron’ny nijerena ny foto-drafitr’asan’ny frankofonia hoe “porofoy amiko fa misy mahantra eto !”. “Rehefa tsy misy mahantra, hoy ireo mpamatsy vola, dia tsy misy fanampiana”, hany ka very tery ny volabe efa nohirahiraina.
Isika rehetra moa ho aiza fa eto ihany e, manidika ny fivoaran’ny toe-draharaha, manala akanjo rehefa mafana dia ampidirina indray rehefa mibalika ingahibe masoandro. Mbola sarotra ny lalàna, hoy ilay fohikely mihanika tendrombohitra.